डान्सको सट्टा सेल्फ डिफेन्स क्लास अनिवार्य गरियोस्
म २१ औं शताब्दीकी नारी हुँ । नारी हुनुमा गर्व लाग्छ । हिजो म एउटा परिवारको मुटुको टुक्रा छोरी आज कुनै मायालु परिवारको बुहारी हुने सौभाग्य पाएकी छु ।
तर, बिडम्बना म यस्तो समाजमा जन्मिएँ, हुर्किएँ र जीवन ब्यतित गरिरहेकी छु, जुन समाजका कतिपय मानिस पुरुष हुनुमा घमण्ड गर्दछन् । उनीहरुसँग असुरक्षित त्यतिबेला महसुस गर्ने गर्दछु, जब समाजिक सञ्जाल अनि समाचारको भित्ता बलात्कार, हत्त्या, यौन शोषणजस्ता समाचारले भरिएको हुन्छ ।
त्यस्ता पिचास, जसले आफ्नो छोरी भन्दैन, जसले नाबालक चेली भन्दैन । त्यस्ता पिचास, जसले सुत्केरी आमा अनि उमेर ढल्केकी वृद्ध भन्दैन । समाजमा जबसम्म त्यस्ताहरुको अन्त्य गर्न सकिँदैन, तबसम्म कुनै नारी एक्लै आफ्नो काम विशेषले घर बाहिर जान सक्दिनन् । ढुक्कले आनन्दको सास लिन सक्दिनन् ।
तरकारी लिन बजार हिँडेकी नारी भरे घर फर्किने मौका पाँउछिन्-पाउँदिनन् थाहा छैन । विद्यालय हिंडेकी किशोरी भरे कुन हालतमा घर आउँछिन् थाहा छैन । थाहा छैन, घरमा एक्लै छोरी छोडेर मेला पात गर्न गएकी आमा साँझ घर आएर छोरीको हातबाट एक गिलास पानी पिउने मौका पाउछिन-पाउँदिनन् ।
धिक्कार छ तिमी राक्षसलाई ! जसले आफ्नो छोरी, दिदीबहिनी अनि आमा चिन्दैन । धिक्कार छ ! त्यो कथित कानुनलाई जुन कानुनले प्रमाण नपुगेको भन्दै कुनै नाबालिक बच्चीलाई बलात्कार गरेको दोषीलाई खुलेआम यो समाजमा हिँड्ने मौका दिन्छ अनि ती आमाबुबा जसले आफ्नो कुलखान्दानको इज्जत बचाउनको लागि आफ्नी छोरीमाथि परेको अन्याय अत्याचार टुलुटुलु हेरेर बस्छन् । एक पटक सोच त तमाम आमाबुबा ! छोरीको इज्जत लुटिँदा जोगिने तिम्रो त्यो कस्तो इज्जत अनि त्यो इज्जतको खोल ओढेर के मस्तको निद्रा निदाउन त सक्छौ ?
आजको यस्तो परिस्थितिमा यस देशका चेलीबेटीलाई ती कुदृष्टिबाट बचाउन मन छ भने बिन्ती सरकार ! स्कुलमा डान्स क्लासको सट्टा सेल्फ डिफेन्स क्लास अनिवार्य गरियोस् । अनि तमाम् आमाबुबामा अनुरोध छ, छोरीलाई घरको काम गर्न सिकाउनुको सट्टा कराँते कक्षामा भर्ना गरिदिनुस् । कम्तीमा आफ्नी छोरीलाई यस संसारमा देख्न त पाउनु हुनेछ ।
(नेपालनाम्चाले सुरु गरेको नयाँ स्तम्भ मनका कुरामा तपाई पनि आफ्ना मनका कुनै पनि प्रकारका भोगाई र भावना लेखेर nepalnamchaha@gmail.com मा पठाउनुस् । नेपालनाम्चा तपाईंकै साथी त हो । सम्पादक)
मिनिस्कर्टको गीत लेख्छौ, हाफपेन्टको नि लेख